Subxaan Allah waa qiso dhab ah kana dhacday JARMALKA IYO MASAR | Berberatoday.com
Subxaan Allah waa qiso dhab ah kana dhacday JARMALKA IYO MASAR
Nin Masri ahoo ku noola magalada qaahira ayaa xanuunsaday waxa uuna utagay shay baadh dhakhtar oo masri ah kadib wala baadhay wuxuna uu u shegay dhakhtarki in mar dhaw xididada wadnaha ee dhiiga qada xidhmayaan waxna looga qabankarin MASAR”! waxa uu ushegay inuu tago yurub halkaaso uu ka helayo cawimaad xanuunkisa ah.
Ninki wuxuu tagay dhakhtar ku yaala wadanka jarmalka oo qaabilsan xanuunada ku dhaca wadnaha wuxuuna la kulmay dhakhtarkii.
Dhakhtarkii ayaa baadhay waxa una ushegay In wax yar u hadhay in xididaha wadnahiisu in ay wada xidhmaan balse lagu samayn karo qaliiin taasna ay tahay boqolkiba kontan 50/50 mcnaha ama wuu dhiman ama wuu badbaadi.
Niinki aadbu u naxay wuxuuna codsaday dhakharkii in uu kulaabto labo cisho dalkisi masar si uu uso maca salaameyo ehelki iyo qarabadi qalinka ka hor maadama uu dhiman karo wana uu ka ogalaaday dhakhtarkii wuxu se ushegay inuu so dhakhsado.
ninki wuxuu ku labtay MSAR isago xaafadiisi kusii socda ayuu arkay gabadh meel hilibka lagu iibiyo agteeda qashinka lafo ka guranaysa ninki intuu istagay ayuu su.aalay gabadhi sababta ay lafaha u guranayso.
waxa ayna ku jwbtay ciyaalkayga ayaan ugurayaa oo labo sano hilib ma ayna cunin waxay sii raacisay lafahan unbaan ukariyaa oo maraq ayaan uga bixiyaa.
Ninki intuu naxay ayuu yidhi ina ken waxa una ugeeyay ninki hilibka iibinayey oo ku dhawa goobta qashinka waxa uuna ku yidhi gabadhan todobaad kasta way kuu imanaydaa waxi hilib ay qaadan karto sii ana bixinaya lacagta ayadana wuu ushegay.
Intay faraxday ayay uducaysay duco qalbiga kaso go.day allow ku caafi oo kusii wax walba od jeceshahay inta aad nooshay ayay tidhi gabadhi.
Ninki labo cisho kadib ayuu tagay JARMALKI.
dhakhtarkii ayaa baadhay inta anu qalin ku samayn ka hor si loo ogaado natijada qalinkisa iyo meelaha looga samayn lahaa.
jwabti natijada dhakhtarkii waxa uu yidhi dhakhtaekee ku daweeyay wad isa soo dawayse?..”
Ninkii waxu ugu jawbay maya maan is dawayn meel kalena maan aadin..
Runtii dhakhtarki wuu u qadan waayay waxayna ku noqotay fajaciso wuxuuna dhakhtarkii ku yidhi waxa ad qaadatay dawo taas fur furtay xididadii o dhan imikana wadnahagi iyo xiddidadi si fican bay u shaqaynayaan ee yaa ku siiyay dawadan ayu sii raciyay hadalkisi.?
Ninki wuxuu yidhi anaa garanaya ka idaweeyay (ALLAH) aya idaweyay
marki an mid umadisa ka mida unaxariistay wana inaxariistay.
Ninki wuxu hadalkiisi kusoo gabagabeyey “Alxamdulilah ilaahayba mahadleh kaas oo soo nooleya lafaha markay burburan oo duqooban”